Mmelite Anguilla ọhụrụ na Protocol ntinye njem na-amalite na Nọvemba 1
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Mmelite Anguilla ọhụrụ na Protocol ntinye njem na-amalite na Nọvemba 1
Ọ bụ Gọvanọ na Hon. Onye isi ala Anguilla kọwapụtara ụkpụrụ ntinye emelitere maka ndị ọbịa nke ga-amalite na Mọnde, Nọvemba 1, 2021.
Ihe achọrọ tupu mbata:
• Ndị ọbịa niile gbara afọ 18 gbagoro ga-enwerịrị ọgwụ mgbochi zuru oke ka ekwe ka ha banye na Anguilla; ndị inyom dị ime bụ ndị a gụpụrụ n'ihe a chọrọ. Nkọwa nke “gbara ọgwụ mgbochi zuru oke” bụ izu atọ (3) ma ọ bụ ụbọchị iri abụọ na otu (21) ka ọgwụ mgbochi nke abụọ gachara. A na-anabata ọgwụ mgbochi agwakọtara mana ha ga-abụrịrị ụdị Pfizer, AstraZeneca na Moderna.
• Ndị njem ga-etinyerịrị maka ikike ntinye na ivisitanguilla.com; ngwa maka ntinye ga-agụnye ego nlele mbata nke US$50 kwa onye.
• A ka ga-achọ nnwale Covid-19 na-adịghị mma, mana a ga-emerịrị ule ahụ ihe na-erughị ụbọchị 2-5 tupu ọbịbịa.
• Ụdị ule anabatara bụ:
o Nnwale mmeghachi omume nke Polymerase Chain Transcription (RT-PCR).
Nnwale mmụba nke Acid Nucleic (NAA).
o RNA ma ọ bụ molekụla ule.
o Emechara ule antigen site na swab nasopharyngeal.
• Ụlọ nyocha nke na-eme ule tupu ọbịbịa ga-enwerịrị nzere ntozu. Agaghị anabata ule nke onwe yana mgbochi mmadụ.
Ihe achọrọ mgbe ị bịarutere:
• A na-anwale ndị ọbịa niile ma ha bịarutere, a ga-achọkwa ka ha nọrọ n'ụlọ nkwari akụ ha, ụlọ villa nyere ikike ma ọ bụ ụlọ mgbazinye ndị ọzọ mgbe a na-edozi ule ahụ (na-emekarị n'ime awa 24).
• Ọ bụrụ na nsonaazụ ule adịghị mma, a gaghị enwe mkpa iche iche. Ndị ọbịa nweere onwe ha inyocha agwaetiti ahụ n'onwe ha.
• Enwere ike ịnwale ndị ọbịa nọ n'àgwàetiti ahụ karịa ụbọchị 8 n'ụbọchị 4 nke nleta ha, na-enweghị ego ọzọ.
Agaghị anabata ngwa ngwa karịa 12:00 PM EST ụbọchị tupu ụbọchị mbata.
A na-agwa ndị ọbịa ka ha rube isi na ịkwanyere ụkpụrụ COVID-19 nke ụlọ ọrụ dị n'agwaetiti, nke gụnyere ikpuchi ihu n'ime oghere ọha; na-ejigide ndọpụ uche ọha mmadụ nke opekata mpe 3 n'etiti ndị mmadụ na ntọala ime ụlọ; na idobe ịdị ọcha nke ọma site na iji aka mgbe niile ma ọ bụ iji aka sanitizer.
Ndị ikike ahụike Anguilla echekwala ọgwụ mgbochi Pfizer iji gbasaa mmemme ịgba ọgwụ mgbochi n'àgwàetiti ahụ ruo:
• Ndị niile dị afọ 12 ruo 17.
• Ndị na-agabeghị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
• Ọgba ọkụ maka ndị ejirila ọgwụ mgbochi Astra Zeneca gbaa ọgwụ mgbochi (ihe dịka 60% nke ndị okenye obodo).